Fikradda Xaaskiisa Ayaa Caan Ka Dhigtay! - Xogside-news
Home BARNAAMIJYADA Fikradda Xaaskiisa ayaa Caan ka Dhigtay!
Wuxu ka shaqaynayay wershad qoryaha samaysa oo weyn muddo dheer, markii usoo gaadhay 4 sano wuxu ahaa mid khibrad leh.
Subax hore markii uu shaqada soo galay ayuu ku wargeliyay maamulaha wershadu inuu shaqadii ka eryay isla markaana dood iyo beryo midna loo baahnayn. Waa uu iska baxay isagoo cadho iyo murugo ka buuxdo, aaminsan in albaabkii kelida ahaa ee risiqiisa la xidhay “ . Waxaana uu yidhi “Markii ay xoogaygii ku shaqaysteen ayay sidan sameeyeen”? Markii uu gabadhiisa u tegey isagoo murugo xooggani ka muuqato ee uu sheegay arrinka, kama ay soo qaadan wax dhib badan sida ay isaga ugu muuqatay waxaana ay ku tidhi: “ dhib ma leh gurigeena ayaan iibnayna oo aan ku ganacsan doonaa, werwerka iska dhaaf ”? sidaasi ayuu yeelay waxaana uu lacagta guriga ku bilaabay inuu ku dhiso guryo oo haddana sii iibiyo. Markii u horeyeey waxa uu dhisay laba guri oo uu iibiyay waxaana uga soo baxay macaash fiican.
Johnson Waxa uu ku qoray buugiisa xusuus qorka “ haddaan ogaan lahaa ninkii shaqada iga eryay halkuu joogo, waxaan uga mahad niqi lahaa abaalka uu ii galay.
Previous articleXukuumadda Somaliland Oo Sharraxaad Ka Bixisay Faaiidooyinka Heshiiska Dp World Iyo CDC
Next articleHiddaha Xanuunada Halista Ah!